» Daawo: War degdeg ah oo kiciyay quluubta Muslimiinta oo naga soo gaaray Kacbada Barakeysan…Badweyntimes.com
Daawo: War degdeg ah oo kiciyay quluubta Muslimiinta oo naga soo gaaray Kacbada Barakeysan…
Feb 7, 2017 - 4 Jawaabood
Habaar Qabe isku dayay in uu dab qabadsiiyo Kacbada Barakeysa ee dalka Sacuudiga ayaa waxaa Gacanta ku dhigay ciidanka Amaanka ee Boqortooyada Dalkaasi.
Barta Twitter-ka Ciiddanka Ammaanka ee Kacbadda Barakaysan ayaa lagu faafiyey Muuqaal Video Yar “Clip Video” oo ku saabsan Isku-daygaas la fashiliyey.
Eeedeysanaha ayaa la sheegay in la qabtay, xilli uu faraha kula jiray dembigaasi.
Wargeyska Al-waddan ee ka soo baxa Sacuudiga ayaa qoray inay Goobjoogayaal u xaqiijiyeen inay Ciiddanka Ammaanka ku guuleysteen inay qabtaan Eedeysanahaasi, xilli uu Bansiin uu watay ku daadinayey meel ku dhow Barxadda Kacbadda si uu Ololka dabkaasi u saameeyo Kacbadda.
Balse, Ciiddanka Ammaanka ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan Falkaasi caddowtooyadda leh.
Dhinaca kale, Boliska Sacuudiga weli wax war ah kama soo saarin magaca Eedeysanaha iyo Waddanka uu ka soo jeedo iyo Faahfaahinada kale.
« Warbixinta Ka HoreysayDAAWO: Faroole oo ka Hadlay Sababta ku kaliftay in uu ka haro Tartanka Doorashada Kursiga M/weynaha..
Warbixinta Xigto »Xog Cod:Madaxweynayaasha maamul goboleedyada hada shir oga socda safaarada Imaraadka iyo shaqsiga loo codeynaayo oo ah..
HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	4 Jawaabood : Daawo: War degdeg ah oo kiciyay quluubta Muslimiinta oo naga soo gaaray Kacbada Barakeysan…
mohamud qudka says:	February 9, 2017 at 5:36 am	waxan aad uga xumahay inkaar allaha ku ridee cadowga cakbada dadka qabadsiinlahaa waxana u mahadcelinayaa ciidanka sida gaarka ugu xilsaaran ilaalinta kacbada illaahow noobadbaadi tiirkayaga qaymahabadan gaaladana allow jebi
mohamed zaki says:	February 9, 2017 at 1:15 pm	habaar qabe kazta iLahay aya gacanta iNo so gelin kanina waxan idinka barYaya inaa la diLo…. nijaaas dhe ay ga baas ala ani yaa itusa…..
Hoodo Ali says:	February 9, 2017 at 2:28 pm	Alle ummada haka qabto cadowga
dad wax magarato ah weeye kuwa ka xun baytka Alle inkaar haku dhacdo
Amiin Cumar Xaaji: says:	February 9, 2017 at 3:57 pm	jaahilsanaa KACBADA MAXAA LAGA GUBAA WAA DHAGAXEE SACUUDIGA ASAGAA DAN KALE WATO